Found 107 ~ Mateu, Mako, Ruka, John, Mabasa, VaRoma, 1 VaKorinte, 2 VaKorinte, VaGaratiya, VaEfeso, VaFiripi, VaKorose, 1 VaTesaronika, 2 VaTesaronika, 1 Timoti, 2 Timoti, Tito, Firimoni, VaHebheru, James, 1 Petro, 2 Petro, 1 Johani, 2 Johani, 3 Johani, Judha, Zvakazarurwa
Nokuda kokuti uipi hunenge hwawanda, rudo rwavazhinji ruchatonhora.
Ndinoti kwauri, zvitadzo zvake zvizhinji zvaregererwa nokuti aratidza rudo rukuru; asi uyo anoregererwa zvishoma anoratidza rudo rushoma.”
Sokundida kwakaita Baba ndokukudaiwo kwandakaita. Rambai muri murudo rwangu.
Kana mukachengeta mitemo yangu, mucharamba muri murudo neni sokuchengetawo kwandakaita mitemo yaBaba vangu ndinoramba ndiri murudo navo.
“Baba ndinodawo kuti avo vamakandipa vave kwandinenge ndiri vaonewo mbiri yangu yamakandipa pamusana porudo rwenyu kwandiri pasi pasati pavapo.
Ndakaita kuti vazive zita renyu uye ndichaita kuti rizivikanwe kuti rudo rwamakandida narwo ruvewo mavari uyewo kuti iniwo ndive mavari.”
Ndiani angatiparadzanise norudo rwaKristu? Kutambudzika here kana kuti nhamo, kana kushushwa here kana nzara kana kushaya zvokupfeka here kana pfumvu kana hondo yebakatwa here:
Rudo ngarurege kuva rwokungonyengedzera, vengai chakaipa, rambai makati kwati kwati nezvakanaka.
Munhu worudo haatadziri mumwe wake. Naizvozvo rudo ndirwo runozadzisa mutemo.
Kana hama yako ichiodzwa mwoyo nezvauri kudya hauchisiri kuita zvine rudo. Usaite kuti chaunodya chiparadze munhu akafirwa naKristu.
Munodei imi? Ndokuvingai neshamhu here kana kuti mwoyo worudo uno unyoro?
1 VaKorinte 13:1
Kunyange zvangu ndikataura nendimi dzavanhu kana dzavatumwa asi ini ndisina rudo ndinongova dare rinorira kana makwakwakwa esimbi anorira.
1 VaKorinte 13:3
Kunyange dai ndikagovera zvose zvandinazvo uye kunyange ndikapa muviri wangu kuti upiswe asi ndisina rudo hapana chandinowana.
1 VaKorinte 13:5
Haruiti zvisina hunhu. Rudo harungongwarira zvarwo bedzi; rudo harungoshatirwa shatirwa nhando, haruna pfundepfunde.
1 VaKorinte 13:6
Rudo harufariri zvisakarurama asi runofarira zviri pachokwadi.
Rudo runotakura zvose. Runoramba ruine chitendero. Runoramba ruine chitarisiro, harurasi mwoyo runotirira zvose.
1 VaKorinte 13:8
Rudo harumboperi. Kuporofita kuchapera; kutaura nendimi kuchaguma. Ruzivo ruchapfuura,
Saka chitendero nechitarisiro norudo zviripo zviri zvitatu, asi chikuru chazvo rudo.
1 VaKorinte 16:14
Zvose zvamunoita zviitei norudo.
1 VaKorinte 16:22
Kana pane asina rudo naTenzi ngaave norushambwa. Tenzi wedu uyai.
Ndakakunyorerai ndakasuwa kwazvo ndichirwadziwa mumwoyo uye ndiine misodzi padama, kwete kuti ndikurwadzisei, asi kuti muzive rudo rukuru rwandinarwo nemi.
Chikonzero chacho ndechokuti rudo rwaKristu ndirwo runotimanikidza kuita zvinhu nokuti zvatakatoona ndezvokuti, munhu mumwechete akafira vanhu vose, naizvozvo vanhu vose vakafawo.
Handitauri izvi kwamuri somurau asi kuti neshungu dzavamwe ndizvionere kuti rudo rwenyu nderwe chokwadi here
Naizvozvo ratidzai masangano rudo rwenyu uye kuti isu tinodada nemi zvakadii kuvarume ava.
Nokuti muna Kristu Jesu kudzingiswa kana kusadzingiswa hakuna basa asi chitendero chine rudo.
Chandinodariro hama dzangu, ndechokuti makadanirwa rusununguko. Asi rusununguko rwenyu ngarurege kuva nzira yokuzvifadza. Asi shandiranai murudo
Naizvozvo kana iniwo pandakanzwa zvechitendero chenyu muna Tenzi Jesu uye rudo rwenyu kuna vatsvene vose
uye kuti nechitendero chenyu Kristu aite musha wake mumwoyo yenyu kuti imi mudzike midzi yenyu uye kucherera hwaro hwenyu murudo,
Ivai nemwoyo wokuzvirereka nemwoyo munyoro nemwoyo murefu muchitirirana zvine rudo
Asi, zvirinani kutaura chokwadi murudo. Tinofanira kukura muna zvose maari iye musoro, Kristu.
Ndiye anoita kuti muviri wose ukure uchizviumba murudo wakabatana uye wakarukana nenhengo dzose dzauinadzo chero nhengo imwe neimwe ichiita basa rayo zvakanaka.
Chandinokunamatirai ndechokuti dai rudo rwenyu rwangoramba rwuchifashukira kuwanda muine ruzivo nechipo chokugona kuona zvinhu nemazvo
Ava vanozviita pamusana perudo vachiziva kuti ini ndiripo kurwira Shoko Rakanaka.
Tinodaro nokuti takanzwa nezvechitendero chenyu muna Kristu Jesu uye nezvorudo rwamunarwo kuvatsvene vose
Pamusoro paizvozvi pfekai rudo runobatanidza zvose pamwechete mukuwirirana chaiko.
Zvino nokudzoka kwakaita Timoti achibva kwamuri akatiunzira dama rakanaka nezverudaviro rwenyu norudo rwenyu. Akatitaurira kuti imi munogara muchitifunga munezvakanaka nguva dzose uye kuti munokarira kutiona sokusuwirawo kwatinoita kukuonai.
Zvino isu zvatiri vamasikati, ngatichengetedzei hunhu hwedu tipfeke demautare rechitendero norudo uye nguwani iri chitarisiro choruponeso.
Vakudzei kwazvo muine rudo navo pamusana pebasa ravo. Imi garisanai zvakanaka.
Asi icho chinangwa chebasa redu ndecherudo runobva mumwoyo wakanaka nehana yakachena nechitendero chisina unyengedzi.
Mukadzi anonunurwa zvake nokubereka vana kana akaramba ari muchetendero uye aine rudo noururami.
Nyatsochengetedza mashoko ezviro kwazvo awakanzwa kwandiri somuenzaniso waunofanira kutevera uri muchitendero norudo zvinowanikwa muna Kristu Jesu.
Asi iwe wakanyatsoongorora zvandinodzidzisa, nomugariro wangu, nechinangwa changu muupenyu nechitendero changu nomwoyo murefu wangu norudo rwangu uye kuramba ndakatsungirira kwangu
Taurira varume vakuru kuti vazvibate pakunwa, vave vanokudzikana, vakangwara vane chitendero kwacho vave norudo kwaro nemwoyo mumwechete.
Asi pakazoratidzwa mutsa norudo rwaMwari Mununuri wedu
Ngatinyatsofungisisai nzira dzokukurudzirana rudo namabasa akanaka.
Kupfuura zvimwe zvose rambai muchingodana nokuti rudo runofukidza zvitadzo zvakawanda.
paunamati muwedzere kudana sehama nehama, pakudana sehama nehama muwedzerewo rudo.
Izvi ndizvo zvatinoziva nazvo chinonzi rudo, zvokuti akapira upenyu hwake pamusana pedu, isuwo tinofanira kuparadza upenyu hwedu nokuda kwavamwe vedu.
Muna izvozvi, rudo runobva rwazadzikiswa zvokuperera matiri kuti tive neruvimbo pamusi wokutongwa, nokuti zvaari ndizvowo zvatiri pasi pano.
Isu tine rudo nokuti akatanga kutida.
Chinonzi rudo ndechichi chokuti, tinofanira kuchengeta mitemo yake. Mutemo wacho, sokunzwa kwamakaita kubvira pakutanga, ndowokuti munofanira kutevedza upenyu hworudo.
Vanhu ivava munzwa mundove pamabiko enyu orudo vanosasana pamwechete zvisina nyadzi. Chavo kuzvifunga ivo pachavo. Makore zvawo asina mvura anongopeperetswa nemhepo, miti yokupera kwamatsutso isina muchero yakafa kaviri, yakadzipurwa.
Asi chandinovenga mauri ndechichi, chokuti wakakanda pasi rudo rwawaiva narwo pakutanga.
Ndinoziva mabasa ako norudo rwako nechitendero chako nokushanda kwako nokutirira kwako uye kuti mabasa ako okupedzisa anokunda okutanga.